Ibe iko nwere ihe nkwado osisi - Ọrụ iji megharịa | Ọrụ On
Ibe iko nwere nkwado osisi
Alicia tomero | 14/11/2021 17:43 | Emelitere ka 22/11/2021 23:27 | .Chọ Mma, Crafts, Ọrụ ụlọ
Nkà a bụ otu n'ime ndị na-amasị anyị icho mma n'akụkụ ọ bụla nke ụlọ. Na ụgbọ mmiri ole na ole ma ọ bụ Ololo ite anyị nwere ike ime ụfọdụ osisi na-akwado ma mezue ụdị vintage ahụ nke na-amasị anyị nke ukwuu. Anyị nwere ike jupụta na nkume nke dị iche iche nha na agba wee tinye eke ma ọ bụ wuru osisi. Ị nwekwara nhọrọ nke iji obere ndị kandụl inye ihunanya aka.
1 Ngwa ndị m ji mee ite:
2 Ntọala nwere osisi popsicle:
2.1 Nzọụkwụ mbụ:
2.2 Nke abụọ:
3 Ntọala nwere mkpanaka osisi square:
3.1 Nzọụkwụ mbụ:
3.2 Nke abụọ:
3.3 Nzọụkwụ nke atọ:
Ngwa ndị m ji mee ite:
Osisi osisi na-eṅomi osisi ice cream.
Ogwe osisi square 0,5 cm n'obosara.
Silikoni na-ekpo ọkụ na egbe gị ma ọ bụ gluu osisi pụrụ iche.
Ụfọdụ mkpa isi ike igbutu osisi ma ọ bụ ihe yiri ya.
Ugboro ole na ole iji mejuo ite mason.
Plastic ma ọ bụ eke osisi maka ịchọ mma.
Ntọala nwere osisi popsicle:
Anyị na-aga ime ntọala nke osisi osisi. Anyị ga-atụle dayameta nke ite iko ahụ n'ụdị ite ifuru. Anyị na-etinye ihe ndị ahụ n'osisi osisi ma bee nha ha. Anyị ga-eme iberibe 32 tụọ ka emechaa mee tacos.
Anyị na-ejikọta na gluu ma ọ bụ silicone osisi anọ, na-eme ụdị ngọngọ osisi. Ha ga-adakọrịrị nke ọma na kọmpat. Anyị ga-esonye n'akụkụ ya ya na gluu, ma na-enye ya ọdịdị square ahụ, ọ bụghị akụkụ anọ. Ya mere, anyị ga-enwe isi osisi mbụ anyị.
Ntọala nwere mkpanaka osisi square:
Anyị na-atụle isi ma ọ bụ dayameta nke ite ekara ite. Dị ka osisi ndị ahụ dị 0,5 cm n'obosara, anyị ga-ahapụ akụkụ, na-agbakwunye ihe anyị tụrụ 1 cm ọzọ. Anyị na-etinye nha na osisi ma bee 8 iberibe. Anyị ga-egbutukwa osisi anọ nke 3 cm.
Anyị na-ejikọta na nsọtụ osisi anọ ahụ ya na gluu. Anyị ga-eme square zuru oke ọ bụghị akụkụ anọ. Anyị ga-ejikwa osisi anọ ndị ọzọ dị ogologo mee ya. Oghere dị obere 3 cm dị obere anyị ga-etinye ha na vertex nke ọ bụla ije ozi dị ka nkwado n'etiti ihe owuwu abụọ ahụ.
Ozugbo anyị sonyeere ihe owuwu ahụ dum, anyị ga-ejupụta otu n'ime ite ahụ na nkume nke dị iche iche nha na anyị ga-etinye otu n'ime obere osisi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts » Ibe iko nwere nkwado osisi
15 nka dị mfe ma mara mma na ajị anụ